तुलसीपुरको कर्णालीमा बाटोको कुराजनीति « Tulsipur Khabar
तुलसीपुरको कर्णालीमा बाटोको कुराजनीति
तुलसीपुर, ९ पुष
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्वर ३ पैयाखोरेकी मनपति घर्तीलाई अचानक पेट दुख्ने व्यथाले च्याप्यो । सडकको सुविधा नभएका कारण गाउँलेहरुले ३ घण्टा जति वोकेर उनलाई सडकमा ल्याए । हतार हतारमा उनलाई अस्पताल पुर्याइयो तर डाक्टरले चेकजाँच गरी नसक्दै उनले संसार छाडिन् । यो मंसिर पहिलो साताको घटना हो । यस्तै घटना छ कल्ले निवासी रामप्रसाद रोकाको पनि । उनकी श्रीमती नन्दकली रोका अचानक विरामी परिन् । हतार हतार परिवारले डोकोमा वोकेर साढे दुई घण्टामा सडकसम्म ल्याए । तर अस्पताल नपुग्दै उनले पनि संसार छाडिन् । यी केही प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्वर ३ का सातवास, कल्ले, वल्ले, पैयाखोरे, नाउँला लगायतका जनताका लागि वाटो भन्ने कुरा अहिले पनि सपना जस्तो छ ।“बाटोको मुख देख्ने आशा मरेको छैन ” स्थानीय कर्ण वुढाले भने ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि त्यहाँ वजेट विनियोजन गरियो । साँघुरो सडक सातवाससम्म जेनतेन पुग्यो । जनताले पहिलोपटक आफ्नै गाउँमा गाडी देखे । सडकको अवस्था कमजोर हुँदा कहिलेकाही मात्रै गाडी सञ्चालन हुने भयो । सडकको अवस्था विग्रदै गएपछि एक निर्माण कम्पनीलाई ढुँगा उठाउन दिने सर्तमा वाटो खन्नका लागि अनुरोध गरे । “खोलामा वगेर जाने ढुँगा लैजाने सर्तमा हामीले बाटो खन्नेका लागि दिएका हौ” सातवास पैयाखोरे सडक निर्माण समितिका अध्यक्ष कर्ण वुढाले वताए । उनले सडक निर्माणको काम अगाडि वढिरहेकै वेलामा केही व्यक्तिहरुको स्वार्थका कारण अवरोध आएको समेत वताए । “जीन्दगीभर हिडेर विताए मर्ने मेलामा सडक होला भनेको त फेरी केके भन्न थाले ” कल्लेका लालवहादुर घर्तिले आक्रोश व्यक्त गरे । उपमहानगरपालिकाका जनता हुँदा समेत घण्टौ हिड्नुपर्ने वाध्यताको अन्त्यका लागि आफुहरु जस्तो सुकै कदम चाल्न पनि तयार रहेको कुरामा जोड दिए । “मर्नै परे मरौला तर काम रोकिन्न” उनले भने ।
कसरी निम्तियो विवाद
घाेराही तुलसीपुर चारलेन सडक निर्माण गरिरहेको तथ्य इन्जियिरिङ्ग एण्ड इन्फ्रा प्रोजेक्ट कम्पनीले सडक विस्तारको जिम्मा लिएको थियो । स्थानीय उपभोक्ता समिति र निर्माण कम्पनीका विचमा सडक विस्तार गरिदिने र त्यहाँको खेर जाने ढुँगा फोरलेन सडकमा लगाउँने सहमति भयो । उपमहानगरपालिका कार्यपालिकाको वैठकले अमानतमा राजस्व लिएर सडक निर्माणको कामलाई सहजिकरण गर्नका लागि ढुँगा उठाउने जिम्मा समेत दियो । वाटो वन्ने भएपनि जनता खुसी देखिन्थे । तर राम्रीबाट ल्याएको तुलसीपुर खानेपानी संस्थाको पाइपमा क्षति हुने भएपछि । कर्मचारी र पदाधिकारीको सहभागितामा सडक निर्माण पश्चात विग्रिएको पाइप वनाउने सहमति पनि भयो । “हामीले गरेको सहमति प्रतिकुल अचानक खानेपानीले वखेडा झिक्दा अचम्म लागेको छ ” उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कर्ण वुढाले भने ।
निर्माण कम्पनीले भने अनावश्यक पैसाको वार्गेनिङ्गका कारण काम रोक्नु परेको वताएको छ । “पैसाको माग भएको थियो राम्रो काम गर्दा के को पैसा दिने भनेपछि विरोध सुरुभएको हो । ” निर्माण कम्पनीका जनक डाँगीले भने । उनले आवश्यक परे प्रमाण समेत पेस गर्ने पनि वताए ।
खानेपानी अध्यक्षको पुत्ला जलाउँछौ ः स्थानीयवासी
तुलसीपुर खानेपानी संस्थाले पाइप काटिएको विषय वनाएर अनर्गल हल्ला फैलाएकोप्रति स्थानीय जनता आक्रोशित भएका छन् । संस्थाका अध्यक्ष खेमराज वलीले मनोमानी ढँगले स्थानीय जनताको भावनामाथि खेलवाड गरेको भन्दै आवश्यक परे पुत्ला समेत जलाउने वताए । “खानेपानीको चिल्लो गाडीमा हिडेर वन्न लागेको सडक भत्काउनेको पुत्ला जलाइन्छ” स्थानीय तिलक वलीले वताए । उनले खानेपानीको पाइप निर्माण गरिदिने सहमति हुँदाहुँदै अनेक वखेडा झिक्नु षडयन्त्र मात्रै भएको वताए । “उसका कर्मचारी र पदाधिकारीले गरेको सहमति उसले नमान्ने हुन्छ” वलीको आक्रोश थियो । “विग्रिएको पाइप वनाउने सहमति हुँदाहुँदै पनि किन कुरा वंगाउने? ”
जस्तोसुकै कुराको पनि प्रतिकार गर्छाै
वाटो निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा सोही विषयलाई लिएर तरुण दल दाङ्ग र नेविसंघले गरेको विरोधको प्रतिकार गर्ने समेत उनीहरुले वताएका छन् । “वाटो नहुँदा कति दुख छ भन्ने कुरा उनीहरुलाई के थाहा ? स्थानीय जनताको मर्म विपरित वोल्ने अधिकार कसैलाई पनि छ ” स्थानीय रेशमवहादुर रोकाले वताए । उनले अनावश्यक विवाद झिक्नेका विरुद्ध हरेक तवरले प्रतिकार गर्ने समेत वताए ।
रुख काँटिएको छैन
सल्लीवन सामुदायिक वनका अध्यक्ष रुपलाल विकले सडक निर्माणका क्रममा रुखहरु नकाटिएको वताए । उनले रुखमा क्षति नहुने गरी सडक निर्माण गरिएको कुरामा जोड दिए । “सरकारले नवनाएको बाटो वनाउँदा अनावश्यक वातावरणको कुरा झिकिएको छ केही पनि भएको छैन” उनले भने । बाहिर कुरा आएजस्तो वनमा कुनै पनि खालको विनास नभएको उनको भनाई थियो । “विरुवा काँटिएको र विनास गरेको भए यहाँ आएर हेरे भयो नि मनमा जे लाग्यो त्यही भन्न पाइन्छ ?” उनले प्रतिप्रश्न गरे ।
प्रकाशित मिति : २०७६ पुष ९ गते बुधवार